Na-eto cucumbers na griin haus | Onye ọrụ ubi na-elekọta anụ ọhịa | February 2020
Atiya Na-eto cucumbers na griin haus
Atụmatụ nke na-eto cucumbers na griin haus
Ọ bụrụ na ị na-aga n'okporo ámá nke mpaghara ọ bụla dịpụrụ adịpụ, mgbe ahụ ị nwere ike ịhụ ụlọ dị iche iche nke ihe nkiri, iko ma ọ bụ polycarbonate. Ndị mmadụ ejiriwo ejiji ndị a, nke a na-akpọ greenhouses, iji nwee ụdị mkpụrụ dị iche iche n'oge ọ bụla n'afọ. Ọdịdị a na-adọrọ nnọọ adọrọ, mana ọ chọrọ oge dị ukwuu, mgbalị na, ọ dị mwute ikwu, ego.
Esi esi nri cucumbers na griin haus
Ekele na enweghị atụ, ọganihu ngwa ngwa na cucumbers na-anọchi anya na ihe ubi niile, na n'ọtụtụ mba. Ebe ọ bụ na nke a bụ otu n'ime akwụkwọ nri ndị na-eto eto na griin haus, ọ bụ otu n'ime ndị mbụ ịbanye nri anyị mgbe ogologo oge oyi na-enweghị vitamin. Kukumba n'onwe ya, n'adịghị ka ihe ọkụkụ ndị ọzọ, enweghị ike ịnya isi nri nke ụmụ mmadụ.
Ovaries nke cucumbers na-acha edo edo: ihe kpatara ya
Oge ugbo ubi abụghị naanị ọṅụ nke owuwe ihe ubi ahụ, kamakwa ụfọdụ nsogbu. Tụlee ihe mere cucumbers ji edozi edo edo na griin ha na ihe ha ga-eme banyere ya. Enweghị fatịlaịza na ala Ala na griin haus nwere ike ịbụ ogbenye na ogige ịnweta, nke na-akpata yellowing. Ebe enweghi akwụkwọ mpempe akwụkwọ na-egbuke egbuke, wee gbanwee agba ya na ọdịiche dị n'etiti ha.
Na-eto cucumbers si na mkpụrụ na griin haus
Na-eto cucumbers na griin haus sitere na osisi, enwere ihe ize ndụ nke inwe otutu okooko osisi. Otú ọ dị, ọtụtụ ndị na-elekọta ubi na-agbaso usoro a n'ihi na ọ bụ obere oge na-eri ma e jiri ya tụnyere usoro ọka. Iji nweta ihe ubi bara ụba ma belata ihe ize ndụ, ọ dị mkpa ịgbaso ndụmọdụ ụfọdụ, malite na nhọpụta mkpụrụ na nkwadebe ha.
Otu esi emeso akpukpo nke cucumbers n'ime griin ha
Nkịtị Wilting bụ nsogbu nkịtị maka ndị na-eto eto na-eto cucumbers na greenhouses. Site n'isiokwu anyị, ị ga-amụta ihe kpatara nke a nwere ike ime, nakwa otu esi alụ ọgụ a na mgbochi ya ka cucumbers wee nwee ike ịmị mkpụrụ ma mee nke ọma. Okpuru ahihia n'ihi ọrịa Ọ bụ ezie na cucumbers bụ ihe ubi na-adịghị mma, otu n'ime ihe ndị mere cucumbers na-agwụ na griin haus bụ ọnụnọ nke ọrịa.
Kwesịrị ekwesị nri cucumbers ke griin haus
Na-eto eto cucumbers chọrọ nkwụsị nke ala na ikuku okpomọkụ, yana ịchịkwa ọnọdụ iru mmiri. Ulo akwukwo ihe ubi a huru otutu uzo na oku, ya mere, igbanye ahihia cucumbers bu ihe kachasi mkpa n'ilekọta. Nke a bụ eziokwu karịsịa maka na-eto eto na akwụkwọ nri na greenhouses. Ihe ka ọtụtụ n'ime ndị na-elekọta ubi na ndị na-elekọta ubi, n'ihi ọnọdụ ndị dị na mba anyị, na-eji polycarbonate greenhouses, iji nweta nnukwu owuwe ihe ubi, ọ dị mkpa iji nyochaa iwu ndị bụ isi na ihe ndị dị na kukumba.
Esi esi kporo cucumbers na griin ha
Kukumba a na-ahụkarị bụ ahịhịa afọ, nke a na-eji ọtụtụ lashes, mgbe ụfọdụ ọ na-eru ogologo mita abụọ. N'aka ọhịa, ụtarị na-agbasa n'akụkụ ihe ndina ahụ, osisi ahụ nwere ọkụ zuru ezu, ya mere ogologo nke lashes na njupụta ha adịghị mkpa. Na griin haus, ọkụ agaghị ezuru osisi ahụ, epupụta ga-acha edo edo, ụda ahụ ga-amalite ire ere, mkpụrụ osisi ahụ ga-abụ odo, ma ọ ga-eme ka afọ ju ya.